राेचक खबर Archives - Page3of 79 - Purbeli News
पहिरनले मानिसको व्यक्तित्व झल्किन्छ । विशेषगरी दक्षिण एसियामा अझ मुस्लिम महिलाले त निकै लामा पहिरन लगाउँछन् । लामो पहिरन लगाउन भनिन्छ पनि । मुस्लिम महिलालाई लामो र पुरै शरीर ढाक्ने पहिरन लगाउन अनिवार्य गरिएको छ । अहिले पनि मुस्लिम महिला बुर्का लगाउँछन् । आफ्नो धर्ममा प्रचलित यो नियमलाई पालन गर्नु आज पनि मुस्लिम समुदायमा राम्रो मानिन्छ । तर यस्त...
काठमाडौँ / इजरायली सैनिकले आफ्ना दर्जनौ सैनिकको स्मार्ट फोन ह्याक भएको बताएको छ । इजरायिली सेनाका अनुसार सुन्दर युवतीहरुको तस्वीर पठाएर सैनिकहरुको स्मार्ट फोन ह्याक गरिएको बताईएको छ । सेनाका प्रवक्ताका अनुसार सैनिकहरुको फोनमा सुन्दर युवतीहरुको तस्वीर पठाइयो र उनीहरुलाई एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्न लालच देखाइयो । सैनिकहरुले युवतीको सुन्दर तस्वीर द...
कोरोना बारे फ्रान्सका भविष्यवक्ताले गरेका थिए यस्ताे भविष्यवाणी !
फ्रान्सका भविष्यवक्ता नास्त्रेदामसले कोरोना भाईरस सम्बन्धी भविष्यवाणी गरेको खुल्न आएको छ । नास्त्रेदामसले ४६५ वर्ष पहिले आफ्नो भविष्यवाणीको पुस्तक ‘सेञ्चुरिज’मा लगभग ९५० वटा भविष्यवाणी गरेका छन् । उनका ति भविष्यवाणीलाई लिएर अहिले बिभिन्न विचार विश्लेषण भइरहेका छन् । तिनै नास्त्रेदामसको भविष्यवाणी अहिले चीनको वुहानमा फैलिएको महामारी संग मिल्न गएक...
आफ्नै पिसाब पिउँछन् यी व्यक्ति
एजेन्सी / सन्तान थरीथरीका भन्ने भनाइ नै छ । यो दुनियाँमा अनेकखालका मान्छे हुन्छन् । मान्छेले गर्ने हरेकखालका कामहरूका पछाडि आफ्ना आफ्ना तर्क दिन्छन् । बेलायतमा एकजना यस्ता व्यक्ति छन् जसले दुनियाँमा सायदै अरू मानिसले खाने चिज खाइरहेका छन् । ३२ वर्षका ती पुरुषले आफ्नो मूत्र पिउने गर्दछन् । पिसाब पिउनाले लामो समयसम्म जवान भइने तर्क उनको छ । पछिल्ल...
बिचरा यी बालक : जसको जिउमा आफै आगो दन्किन्छ
आत्मदाह गर्दा मान्छेले आफ्नो जिउमा आफै आगो लगाएको त सुनिएकै हो । यसरी जिउमा आगो लगाउँदा आगोको श्रोतबाट आगो बालेर जिउमा झोँस्नुपर्छ । तर भारतमा एकजना यस्ता बच्चा छन् जसको जिउमा आफै आगो बल्छ ।भारतको तमिलनाडुमा रहेका तिन महिनाका राहुल नामका बालकमा यस्तो भयानक, दर्दनाक तथा अनौठो रोग छ । सुन्दै आङ सिरिंग हुने रोग हो त्यो । उनको सरीरबाट आफै आगोको ज्वाला ...
८३ वर्षीया वृद्ध, मृत घोषणा गरेको १० घण्टामा ब्युँझिएपछि . . .
युक्रेनमा ८३ वर्षीया वृद्ध मृत घोषणा गरिएको १० घण्टापछि पुर्नजीवित भएकी छन् । स्टिरजावका शहरका वाली जीनिया दिमुख रिटायर्ड नर्स हुन् । उनी एक हप्ताअघि कोमामा थिइन् । उनका परिवारले उपचारका लागि घरमा डाक्टर बोलाए । ती महिलाको अवस्था गम्भीर भएको कारण उनलाई अस्पताल लगिएमा समस्या बढ्न सक्ने डरले घरमै औषधी उपचारसहित आराम गर्न भनियो । तर केही समयपछि जी...
सन्तान थरीथरीका भन्ने भनाइ नै छ । यो दुनियाँमा अनेकखालका मान्छे हुन्छन् । मान्छेले गर्ने हरेकखालका कामहरूका पछाडि आफ्ना आफ्ना तर्क दिन्छन् । बेलायतमा एकजना यस्ता व्यक्ति छन् जसले दुनियाँमा सायदै अरू मानिसले खाने चिज खाइरहेका छन् । ३२ वर्षका ती पुरुषले आफ्नो मूत्र पिउने गर्दछन् । पिसाब पिउनाले लामो समयसम्म जवान भइने तर्क उनको छ । पछिल्लो ४ वर्षदे...
फिलिपिन्स / फिलिपिन्समा हरेक वर्ष सरकारले खर्च व्यहोर्ने गरी सामूहिक विवाह हुन्छ। त्यहाँ यसवर्ष पनि सामूहिक विवाह सम्पन्न भएको छ। तर यसपटकको विवाह पहिले भन्दा भिन्न थियो। २ सय २० जोडीले विवाहमा मास्क लगाएका थिए। कोरोनाभाइरसको त्रासकका कारण उनीहरुले मास्क लगाएर विवाह गरेका हुन्। फिलिपिन्सको शहर बाकोलोडमा सम्पन्न भएको यस विवाहको भिडियो सार्वजनिक भएको...
महामारीका रुपमा चीनमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणले विश्वकै ध्यान तानेको छ । चीनको वुहानबाट शुरु भएको भएको कोरोनाका कारण २२ सय मानिसको मृत्यु भइसक्दा विश्वभरका मुलुकले यसबाट बच्न अनेकौ शतर्कता अपनाइ रहेका छन् । यसरी विश्वभर कोरोना भाइरसको आतंक जारी रहेको बेला सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरु बिचमा भने कोरोना नामक एक बियर भाइरल बनेको छ । ...
चिकित्सकले रुवाउन खोज्दा शिशु रिसाएपछि सामाजिक सञ्जालमा तस्वीर भाइरल
काठमाडौं / एक नवजात शिशुको तस्वीर अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिरहेको छ । यसको मुख्य कारण भनेको नवजात शिशुको एक्सप्रेशन । यो घटना ब्राजिलको रियो डी जेनेरियो अस्पतालको हो । १३ फरवरीमा एक महिलाले शिशुलाई जन्म दिएकी थिइन् । नाभी काट्नु अघि चिकित्सकले शिशुलाई रुवाउने कोशिस गरे । त्यसक्रममा नवजात शिशुले देखाएको प्रतिक्रियाबाट चिकित्सक छक्क परेका छन...